Man United Oo War Cusub Ka Heshay Jadon Sancho, Arsenal Oo Aubameyang Dartii U Fasaxaysa Lacazette, Liverpool & Chelsea Oo Isku Haysta Difaac Iyo Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa Iibka - Gool24.Net
Man United Oo War Cusub Ka Heshay Jadon Sancho, Arsenal Oo Aubameyang Dartii U Fasaxaysa Lacazette, Liverpool & Chelsea Oo Isku Haysta Difaac Iyo Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa Iibka
Arsenal waxay iibin doontaa weeraryahanka reer France ee Alexandre Lacazette oo 29 jir ah, waxaana £30 milyan oo Gini uu ugu tegi doonaa Atletico Madrid, isla marka uu weeraryahanka reer Gabon ee Pierre-Emeric Aubameyang oo 31 jir ah uu qandaraaska cusub saxeexo. (Star Sunday)
Brighton waxay iska diidday dalab uga yimid Leeds United oo ahaa in £22 milyan oo Gini ay kaga iibiso 22 jirka difaaca dhexe ee Ben White oo xili ciyaareedkii hore amaah ku joogay Elland Road. (Sky Sports)
Liverpool waxay xiisaynaysaa White laakiin Chelsea ayaa isku diyaarinaysa dagaal ay la gasho si ay uga hor qaaddo difaacan iyadoo iibinaysa Antonio Rudiger oo 27 jir ah, kaas oo lacagtiisa ay u isticmaali doonto xiddigan. (Star Sunday)
Chelsea waxa kale oo ay raadinaysaa difaaca Manchester City ee John Stones, iyagoo rajaynaya in 26 jirkan reer England ay ku helaan £20 milyan oo Gini. (Sunday Mirror)
Arsenal waxay ku biirtay tartanka loogu jiro khadka dhexe ee Marseille ee Morgan Sanson oo ay hore u doonayeen Tottenham iyo West Ham United. (Le10Sport)
Difaaca reer England ee Kyle Walker-Peters oo 23 jir ah waxa uu u dhow yahay inuu Tottenham ugu wareego £12 milyan oo Gini, kaddib markii uu heshiis shaqsi ah la gaadhay, kooxdiisa Southampton na ay ogolaatay. (Sunday Mirror)
Arsenal waxay joojisay baadidoonkii ay ugu jirtay goolhaye cusub, kaddib bandhiggii cajiibka ahaa ee Emiliano Martinez oo sii buuxiyey booska goolhayaha koowaad intii uu dhaawaca ku maqnaa Bernd Leno. (Sun on Sunday)
Leicester iyo Liverpool ayaa xiisaynaya difaaca bidix ee kooxda Olympiakos ee Kostas Tsimikas oo ah 24 jir u dhashay waddanka Greece, laguna heli karayo £12 milyan oo Gini. (Mail on Sunday)
Borussia Dortmund waxay u bandhigaysaa Jadon Sancho heshiis cusub oo si weyn loogu kordhinayo mushaharkiisa, haddii Manchester United aanay bixinin £100 milyan oo Gini inta ka horreysa 10 August. (Bild)
Agaasimaha kubadda cagta Bayer Leverkusen ee Rudi Voller ayaa uga digtay Chelsea in aanay kusoo talo-gelin qiimo-dhimis looga sameeyo xiddiga khadka dhexe ee Kai Havertz oo 21 jir ah, waxaana loo sheegay inay la shir timaaddo £90 milyan oo Gini. (La Gazzetta dello Sport)
Xiddiga khadka dhexe ee Barcelona iyo xulka Brazil ee Philippe Coutinho oo 28 jir ah, waqtiganna amaah kula jooga Bayern Munich ah go’aan rasmi ah kama qaadan karayo mustaqbalkiisa illaa inta uu dhamaanayo tartanka Champions League. (Sport)
Arsenal waxay £100 Milyan oo Gini ku bixinaysaa xiddigaha Dani Ceballos oo khadka dhexe ka ciyaara, amaahna ay kaga soo qaadatay Real Madrid, khadka dhexe ee Atletico Madrid ee Thomas Partey oo 27 jir ah iyo difaaca Lille ee Gabriel oo 22 jir ah, inta uu furan yahay suuqa iibka ciyaartoyda ee xagaagan. (Sun on Sunday)
Boodhka sare ee maamulka Liveprool ayaa u sheegay Jurgen Klopp inuu iibiyo ciyaartooyo ay ka mid yihiin Naby Keita oo 25 jir ah, si uu u helo lacag uu kusoo iibsado kubbad-sameeyaha Bayern Munich iyo xulka Spain ee Thiago Alcantara oo 29 jir ah. (Kicker)
Atletico Madrid waxay ka fiirsanaysaa inay u dhaqaaqdo laacibka khadka dhexe uga ciyaara Arsenal ee Lucas Torreira oo 24 jir ah. (Mundo Deportivo)